eNasha.com - नेपाली ताराको सुटिङमा पुग्दा
'ए साँच्ची, नेपाली तारा पनि त भइरहेको छ यहाँ !' इण्डियन आइडोल सकिएपछि धेरै जना झसङ्ग भएका थिए । ती झसङ्ग हुनेहरुलाई यस पटक इनशाडटकमले प्रत्यक्ष सुटिङ रिपोर्ट पढाउने विचार गरेको छ ।
नेपाली ताराका कार्यक्रम निर्देशक राजेन्द्र शलभले मलाई स्टुडियो फोरमा ठीक तीन बजे उपस्थित भइसक्नु पर्ने जानकारी दिनु भएको थियो । म पुगेँ, साढे तीन बजे । जहाँ वाद्यवादक, गायकगायिका, कार्यक्रम प्रस्तोता त्रय सत्य, स्वरुप, ऋतु आफूलाई 'स्ट्याण्डबाई' मा राखेका थिए । कार्यक्रम निर्माता नीलबाराही फिल्म्सका रञ्जित आचार्य पनि घरि यता घरि उता गर्दैमा असिनपसिन हुनुहुन्थ्यो ।
म आइरहेको देख्ने बित्तिकै मेरा लागि छुट्याइएको सिट देखाउँदै कार्यक्रमका प्रबन्धक दिवाकर शर्माले मुस्कान छर्नु भयो । मैले छेउका सिट मागेँ र त्यही अनुसार बसेँ, जहाँ प्रिज्मा एड्भरटाइजिङकी कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । क्यामेराको कुन कोणबाट देखेर हो, राजेन्द्र शलभले मलाई फोन गर्नुभयो- "तिमी त राम्री नारीको छेउमा पो बसेछौ !" खासमा भन्ने हो भने मैले मेरो छेउमा भएका महिलातिर नजर हाल्नसमेत भ्याइसकेको थिइनँ, उहाँले राम्री नारीको छेउमा खोजीखोजी बसेको आरोप लाउन भ्याइसक्नु भएछ !
यसपछि केहीबेर अझै सुटिङमा विलम्ब भयो र आदरणीय सङ्गीतकार दीपक जङ्गमले मलाई देख्नु भयो । उहाँले बोलाउनु भयो, "धेरैपछि पो भेट भयो त !" उहाँले हात मिलाउँदै भन्नु भएको यो कुरामा गुनासो पनि मिसिएको थियो, भेट हुन छाडेकोमा । मञ्चमा राम थापा र अतिथि निर्णायक नुपूर भट्टाचार्यसँग पनि नमस्ते आदानप्रदान भयो । गायक/सङ्गीतकार राम थापासँगको चिनजान 'कामना' पत्रिकामा काम गर्दा देखिको थियो तर भट्टाचार्यसँगको प्रत्यक्ष भेट त्यहीँ भयो । जब कि भट्टाचार्यको म निकै मौन प्रशंसक हुँ ।
लुकेको माइकबाट आवाज आयो, आवाज शलभ दाइको थियो- "ल अब रोलिङ्, को कहाँबाट आउने के गर्ने, भने अनुसार गर्ने है !"
स्वागतम गरिसकेपछि कार्यक्रम प्रस्तोताद्वय स्वरुप र ऋतुले कार्यक्रमको औपचारिक शुरुवात गरे, जसका लागि तीन पटक टेक लिनु पर्‍यो ।
यो कार्यक्रममा दर्शक पनि थपिएकाले निकै रोचक भएछ । किनभने यसअघिको नेपाली तारा-१ को उत्कृष्ट पाँचको सुटिङ हेर्न म पनि गएको थिएँ र त्यसबेला आफूआफू रमाइलो मान्नु बाहेक अन्य विकल्प थिएन । यस पटक चाहिँ एक्लै रमाउनु र गाउनु पर्ने बाध्यता थिएन । साथीभाइ र छरछिमेक हेर्दै रमाउने अवसर थियो ।
दश जना प्रतिस्पर्धी मञ्चमा उभिएर परिचयात्मक गीत गाए, तिनले पर्फ पनि गरे । तर यो ज्यादै छोटो थियो र त्यति आकर्ष थिएन । पर्फ गर्दा पनि १० जना उप्रिmने र पर्फ गर्नसक्ने पर्याप्त ठाउँ देखिएन । त्यसैले खाँदखुँदमा आफ्नो नृत्य कला -हल्लिने कला भनौँ किनभने त्यहाँ कसैले पनि नृत्य देखाउने स्थिति थिएन) देखाउने अवसर थिएन । ट्रयाकमा गाएको स्पष्ट थाहा हुन्थ्यो, त्यो थाहा नदिने किसिमको भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । किनभने (यो उदाहरणलाई अन्यथा नलिइयोस्) एक पटक भारतीय च्यानलको एउटा कार्यक्रममा ट्रयाकमा गाएको कुरामा मेरो र मेरो दाइ अश्विनी कोइराला -उहाँ पनि कान्तिपुर साप्ताहिकको पत्रकार हुनुहुन्छ र सङ्गीतमा गहिरो रुचि राख्नुहुन्छ ।) बीच बाजी पर्‍यो । बाजीको कुरा के थियो भने मैले भनेँ, ट्रयाकमा पहिल्यै रेकर्ड गरेर यो नाटक नदेखाइएको भए बेस हुन्थ्यो । कोइराला अग्रज यसमा सहमत हुनुभएन । उहाँले भन्नुभयो- "यो उनीहरुले 'लाइभ' गाएका हुन्, रेकर्डेड हुँदै होइन ।" पछि मैले 'रेकर्डेड' र 'लाइभ' गाउँदाका फरक स्पष्ट बुझाइदिएपछि उहाँ सहमत हुनुभयो । नेपाली तारामा चाहिँ यी दश जनाले रेकर्डेड गीत गाएर पनि नृत्य राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न नसकेकोमा दुःख लागिरहेको थियो ।
यसपछि यस अङ्कबाट बिदावारी हुने एक प्रतिस्पर्धीको नाम उच्चारण गर्ने पालो थियो । उद्घोषक स्वरुपले सूर्यकिरण लामा, सुरज थापा र तारा लक्समको नाम लिएर दुइ कदम अगाडि बढाउन आदेश दिए । यसपछि निर्णायक मण्डललाई उनीहरुबारेको प्रतिक्रिया सोधियो, जहाँ सङ्गीतकार दीपक जङ्गमले भन्नुभयो- "उहाँहरुको क्षमताबाट दर्शक भलिभाँति परिचित हुनुहुन्छ, हामीले हाम्रो काम त गरिसकेका छौँ । बाँकी जिम्मा जनताकै हो ।" यसपछि मलाई लाग्यो, यी तीन जना चाहिँ पक्कै 'बटम थ्री'मा पुगेको हुनुपर्छ । तर होइन रहेछ, बदमास स्वरुप र ऋतुले हामीलाई झुक्याएका रहेछन् । यी तीन जना त सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उत्कृष्ट तीन पो भएका रहेछन् !
त्यसपछि साँच्चिकै बाहिरिने प्रतियोगीमध्ये 'बटम थ्री'का तीन जना उच्चारित भए, जसमध्ये सबिना, रोजिना र स्वेता थिए । लहरै तीन महिला उभिएको देखेर मलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । निर्णायक नुपूर भट्टाचार्यले त भनिहाल्नु भयो- "यो त अन्याय नै भयो ! महिलाहरुलाई पनि पुरुषसरह नै अवसर दिनुपर्छ ।" त्यसैले उहाँको आशय पुरुषहरुलाई जत्तिकै नारीलाई पनि ठाउँ दिनु पर्‍यो भन्ने आग्रह थियो ।
पछि रोजिना र स्वेतालाई सञ्चालकहरुले बाँच्न सफल भएको र रोजिनाले मञ्च छाड्नुपर्ने घोषणा गरे । सबिनाको आँखाबाट बर्रर आँशु झरे, यो साथीहरुबाट छुट्टिनु पर्ने पीडाको आँशु थियो । यता नुपूर भट्टाचार्यको आँखाबाट पनि आँशु आए जब सबिनाले भनिन्- "अन्तिममा म यो मञ्चलाई ढोग्न चाहन्छु ।" उनको मञ्च-प्रेमबाट सबै नतमस्तक थिए । यता उनका बाँकी नौ जना साथीहरु पनि भोलिको आफ्नो नियति पनि यही हुने हो कि भन्ने सोचेर होला, निन्याउरो थिए । खासगरी तारा लक्समले सबिनाको बिदाईलाई निकै चित्त दुखाएको प्रतीत हुन्थ्यो ।
यसपछि चिया छुट्टी भयो । सबैले बोझिल बिदाईबाट केही राहत पाउन बाहिर निस्किए र मनोञ्जनको धमाकाका लागि आफ्नो 'इनर्जी' साँच्न थाले । म भने कार्यालयमा आउन हतारो मानेर कार्यक्रमका निर्देशक, निर्माता, कार्यक्रम सञ्चालक सबैसँग बिदाबारी भएँ । सुटिङ हेरेपछि मलाई के लाग्यो भने, हिम्मतिली सबिनाले बिदाईमा राम्रै गीत गाइन् । उनले 'सरसर अलि अलि वर...' गीतमा उठान त बिगारिन् तर अन्तरामा राम्रैसँग गाइन् । तर उनले गर्नुपर्ने मिहिनेतको पहाड अझै उनको अघिल्तिर तेर्सिरहेको छ झैँ लाग्यो मलाई ।
रियालिटी शो नेपाली तारा सङ्गीतकार रिलिज लुकेका कुरा तातोपीरो ट्रयाक बाहिर उपलब्धि समुद्रपार अवार्ड भिडन्त क्या बात ! प्रेम र विवाह कीर्तिमान पेज थ्री विचार रुचि गायिका गायक हल्ला